Tale kabinetran’ ny Fop : Mampitandrina ny mpampihorohoro -
AccueilRaharaham-pirenenaTale kabinetran’ ny Fop : Mampitandrina ny mpampihorohoro
Tale kabinetran’ ny Fop : Mampitandrina ny mpampihorohoro
17/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy marina ny filazana fa mikatso tanteraka fikarakarana taratasy eo anivon’ny tontolon`ny asam-panjakana manerana ny Nosy. Tsy mitombina ihany koa ny fanelezana fa nanakatom-baravarana sy hampikatso ny fampandehanan-draharaha rehetra ireo mpiasa eo anivon`ny minisiteran`ny Asam-panjakana, ny fanavaozana ny raharaham-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy eny amin’ny 67 ha. Araka ny fanamarihan’ny talen’ny kabinetra minisiteran’ny Asam-panjakana, Atoa Avimanana, omaly dia misy ny te-hiasa dia terana tsy hiasa fotsiny fa mizotra amin’ny tokony ho izy ny asa eny an-toerana. “Tsy misy asa mijanona eny amin’ity minisitera ity, indrindra ireo mandray ny “equivalence” ary mpanara-maso ny asa efa ho 20 no nalefa any amin’ny faritra amin’izao fotoana izao. Izany hoe misy mandray izay manao raharaha eny amin’ny minisiteran’ny Asam-panjakana, ny fanavaozana ny raharaham-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy”, hoy hatrany ny fanazavana.
Nofaritan’ ity talen’ny kabinetra ity fa misy ny fahalalahana maneho hevitra eto amin’ny firenena matoa misy mpiasa mitaona ny olona tsy hiasa sy mitaky ny fialan’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisitera. Fa tsy ekena kosa ny fampihorohoroana, manoloana ny fampitahorana ataon’ireo mpiasa mampikatso ny asam-panjakana, hoy hatrany ny teniny ka mampitandrina azy ireo. “Tsy manaiky ny fandrahonana ny mpiasa izahay. Manana zo fototra hiasa ny mpiasa, ary tsy tokony hidiran’ny pôlitika ny asam-panjakana”, hoy ny fanamarihan’ny Avimanana, tale kabinetran’ ny Fop. Loza mitatao ho an’ny firenena tokoa raha tsy miasa ity minisitera ity satria avy ao avokoa ny raharaham-panjakana rehetra no miainga. Eo koa ny ho avin’ireo tanora, izay mitady asa sy manomana fifaninanana ka mitady diploma “equivalence”. Raha tsy hiasa izany ny Fop dia ahoana ireo mpiasa sy mpianatra, ary tanora mila raharaha eny an-toerana.
Fampandrosoana an’I Madagasikara : Naneho ny fahavononany ny Diaspora
Tratra ny tanjona. Mahatratra 400 ireo Malagasy mila ravinahitra any ivelany no tonga mandray anjara amin’ilay Fihaonamben’ny Diaspora tanterahina eto Madagasikara, etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka, amin’izao fotoana izao. Noho izay indrindra, nanambara ny teo ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Feno 59 taona
Lalatiana Ravololomanana : “Mila handraisana fepetra Ravalomanana”
Fisandratana : Naharesy lahatra an’i vohipeno